I-Gillian's Luxury Beachfront, ukubukwa okuhle kakhulu edolobheni
(343 okushiwo abanye)
Port Macdonnell, South Australia, i-Australia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Gill
Ikhaya elifakwe kahle esitezi esingezansi maqondana nebhishi lokubhukuda eliphephile. Ikhaya elizimele linekhishi, indawo yokuphumula, yokudlela negumbi lokubhukuda. I-pergola yangaphandle yokudlela yangaphandle nama-BBQ's. Itafula nezihlalo ngaphambili. Ishawa emnyango ngasentshonalanga kwendlu. Kulala okungu-6 kodwa kungaba nemibhede emi-2 eyengeziwe. Ukuhamba kalula kuyo yonke into. Izindawo zokuhlala ezengeziwe e-Port MacDonnell: Ukubhuka okuncane ngezimpelaviki ezinde nobusuku obu-3 ngePhasika ubusuku obungu-2 be-Xmas hol.
Le ndlu enhle yaphansi yaphansi inikeza ukubukwa kolwandle kuwo wonke amagumbi. Konke okudingayo ukuze ujabulele ukuhlala kwakho. Jabulela indawo yokudlela yangaphandle yangasese ephelele ene-BBQ. Amakamelo okulala amathathu wonke akhe ngezingubo kanti amabili okulala anama-TV ama-flat screen, wonke anama-heater kanti indlu ine-air conditioner. Igumbi lokulala 1. linombhede omkhulu kanti amanye amagumbi okulala amabili anemibhede eyindlovukazi wonke anelineni elisezingeni eliphezulu. Singakwazi ukwengeza imibhede emibili yokulala okusho ukuthi ingabamba abantu abangafika kwabayi-8. Lena indawo ekahle yokubalekela, ebhekene ngqo nebhishi lokubhukuda elihle. Njengoba lingekho igceke elivalekile abantu abanezingane kumele baqaphele. Lena futhi yindlu engabhenywa futhi azikho nhlobo izilwane ezifuywayo ezamukelwayo. I-pool table ingeyabantu abangaphezu kweminyaka engu-12 kuphela futhi azikho iziphuzo okufanele ziphuzwe eduze kwetafula lokubhukuda. Izindleko ezabantu abadala ababili futhi kunenkokhiso eyengeziwe ngomuntu ngamunye owengeziwe.
Izivakashi ziyakwazi ukungena kuyo yonke indlu ephansi, kuyilapho thina sihlala phezulu sinikeza izivakashi zethu ubumfihlo obuphelele.
Ukusuka kuleli khaya elihle ungahamba uye esitolo esijwayelekile, ihhotela, Indawo yokudlela yase-Periwinkles kanye ne-The Bay Pizzaria. IPort MacDonnell yaziwa ngokudoba kwayo okuhle kakhulu, ukuze ukwazi ukujabulela injabulo yolwandle. Jabulela ukuhamba okude ogwini, ukugibela ibhayisikili endleleni yomjikelezo noma nje ujabulele ukuphuma nokushona kwelanga okuhle. I-Port MacDonnell nayo iyidrayivu emfushane nje yokuya ezindaweni eziningi ezikhangayo ze-Limestone Coasts okuhlanganisa ne-Blue Lake edume umhlaba wonke.
4.90(343 okushiwo abanye)
4.90 · 343 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-343
Sihlala endaweni ethule kakhulu ye-de-sac. Indlu ibhekene ngqo nolwandle. Indawo yokupaka isemgwaqweni, kwesokunxele sezitebhisi eziwela utshani noma ngakwesokunene somgwaqo, ngicela ungapaki endaweni engenalutho eduze kwendlu.
Nakuba sihlala phezulu asiphoqeleli ubumfihlo babantu esivame ukuba nabo uma othile edinga okuthile, iziqondiso noma izeluleko ngendawo. Ukuze uxhumane nathi badinga ukukhalisa insimbi yomnyango wangaphambili.
UGill Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Port Macdonnell namaphethelo